Dunida ee sayniska iyo farsamada heerka sare waxaa aad muhiim u ah in la ogaado in tiknolojiyada cusub waxaa soo baxaya maalin kasta si loo hubiyo in qalooca baahida user la wareejiyay in sida ugu wanaagsan ee suurto gal ah. Sidaa darteed waxaa loo baahan yahay ee saacaddii u user in ay bedelaan gmail, iyo qalabka Xararad si farsamooyinka ugu dambeeya oo si sahlan loogu raaxaysan karaa. Isbedelkan ayaa of technology sidoo kale loola jeedaa in isbedel ah ee OS qalabka taas oo dhibaato wayn haddii user uu doonayo si ay u gudbiyaan xogta ay ka OS jirka ka mid ah oo cusub. Waxaa jira tobanaan kun oo farsamooyinka iyo horumar in lagu diyaarinayo in arrintan la xiriira iyo in la hubiyo in ugu fiican waxaa loo dhiibaa si user ah. Mid ka mid farsamo sida uu yahay si ay u gudbiyaan xiriirada ka iPhone in Blackberry oo waa hab ka kaaftoomi lacag la'aan ah haddii la fuliyay oo waafaqsan tilmaamaha iyo faahfaahinta in lagu soo sheegnay la software gaar ah. In tutorial this hababka fudud laga wada hadli doono oo la hubiyo in ay xaqiijiyaan hawsha sakhiray marna waa arin oo dhan ka dhigi doonaa. Geedi in halkan lagu kuwo sahlan oo toos ah oo lagu dabaqi karo wax user si aad u hesho shaqadii la soo qabtay ilbiriqsi oo kaliya ma ahan siinayaa nabadda ee maskaxda, laakiin sidoo kale u ogolaataa user ay u helaan xiriir la isbeddellada ugu dambeeyey iyo teknoolajiyada.
Qeybta 1: Isticmaal Lugood iyo software desktop blackberry
Qeybta 2: gudbiyo blackberry
Qeybta 3: Mid ka mid ah iPhone click inay kala iibsiga iPhone (daaqadaha / Mac)
Tani waa tii ugu horraysay, ugu horreeyey iyo habka ugu fudud in mid ka mid raaci karaan arrintan la xiriira. Waxa ay u ogolaataa user ay u helaan xiriirada si blackberry ka iPhone oo aan wax dhibaato ah. Tallaabooyinka ku lug yihiin si caddaalad ah oo fudud oo ay tahay in la raaco si loo sameeyo wixii kaloo ah.
1. iPhone waa in lagugu xiro PC ah talaabadii ugu horeysay in la bilaabo nidaamka.
2.Beerta horay barnaamij software Lugood markaas waa in la bilaabay in la hubiyo in talaabooyinka horukaca ee geeddi-socodka.
3.It waa talaabada ugu muhiimsan si loo hubiyo in qalabka la soo ogaado.
4.The saldhigyo iPhone yihiin ilaa E heli iyo kuwan goobaha ay "Mail, Xiriirada iyo Calendar" gudahood doorasho waa in ay selecte.
Doorasho 5.The ah "contacts Import SIM" waxaa ku dhacay in ay sii wadaan geeddi-socodka.
6.On menu telefoonka ee Lugood ah tab info waa in la sii adkeeyey ah.
7.The buug cinwaanka iyo xiriirada waa inay synced si loo hubiyo in kala iibsiga ee xiriirada ka iPhone in PC dhameystiray.
Tababaraha desktop blackberry 1. Waa in la soo bixi. Version ugu dambeeyay waxaa la doorbiday oo waxaa laga heli karaa website blackberry ee rasmiga ah.
2.Once software ka dibna waxaa lagu rakibay waa in la ordaan oo blackberry waa in lagugu xiro iyada oo cable USB in uu yimaado waa la ah.
3.Under menu qabanqaabiyaha user ay u baahan tahay in guji xiriirrada + xiriiro suuqa kala. Oo dhan fursado kale waa in la naafada iyo dib button reserved waa in la sii adkeeyey.
4.Under jihada u hagaagsan jeeda ikhtiyaarka ah "hal hab si aad qalab oo kaliya" waa in la doortay oo markaas OK.
5.To bilowdo hawsha ugu muhiimsan user ay u baahan tahay in guji ikhtiyaarka qabanqaabiyaha u hagaagsan.
6.The user u eegi karaan isbedelada iyo waa riix badhanka nidaameed inay nuqul ka dhan xiriirada iPhone oo ku dhameysan nidaamka.
Qeybta 3: 1 click iPhone inay kala iibsiga iPhone ( daaqadaha / Mac )
Wondershare MobileTrans waa mid ka mid ah barnaamijyada software aad u yar oo hufan oo u oggolaan isticmaala si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican marka ay timaado xawaaraha si degdeg ah oo wax ku ool ah. Waxaa sidoo kale in la xuso in barnaamijka software-ka waa u fududahay in la isticmaalo iyo bandhigaysaa interface ah in si fudud loo xakameyn karaa oo halkan user marnaba wajahaya arrin kasta oo arrintan la xiriira. Waxaa xusid mudan in isticmaalka software ah waxaa taageera dawladda ee adeegyada farshaxanka macaamiisha in ay yihiin had iyo jeer in ay ku caawiyaan macaamiisha ka soo baxay ee saacadda ay baahan yihiin. La socotid faaidooyin ma suurtowdo in taxdo dhamaan sifooyinka barnaamijyada habka ugu fiican ee article yar si kastaba ha ahaatee qayb ka mid ah sawir guud ahaan soo socda waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka ka mid ah barnaamijka in ay yihiin xusid mudan halkan.
1.It waa 100% halis xor ah oo nabad ah ay u isticmaalaan sabab u ahaa xaqiiqada ah in ay jirto ku lug lahayn ee ay internet oo halkan xirka daruur lahayn.
2.Apart ka xiriirada gabal laga cabsado ah ee technology wareejin karaan durdurrada sawir, maktabadda sawir, albums sawir iyo dhammaan kale madadaalada warbaahinta nooc kasta.
3.It sidoo kale ku wareejin karaa Guda wac, fariimaha qoraalka ah iyo sawirada la xidhiidha baaqyo iyo xiriirada.
Kor ku xusan waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka ka mid ah barnaamij software iyo sabab la mid ah waa barnaamij caan ah taas oo ka dhigaysa hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si user ah kaas oo kaliya aan ahayn sidii uu u doonayo iyo dalabka laakiin sidoo kale sida ay shuruudaha. Marka software ayaa lagu rakibay waxa ay taasi la hubiyo in qalabka waxaa lagu ogaan karo ee ay u gaar ah oo arrintan la xiriira ma rakiban oo cusub ayaa loo baahan yahay sida nidaamka waa mid aad u fudud in la raaco iyo hubiyaa in user weli ka kaaftoomi lacag la'aan ah oo dhan kala iibsiga. Waxaa loo isticmaali karaa si ay xog ka iPhone wareejiyo iPhone, iPhone in Android oo iPhone daaqadaha taas oo si caddaalad ah oo fudud loogu tala galay barnaamijyada software this ay sabab u tahay isticmaalka iyo qaabka looga cabsado.
Geedi socodka isticmaalka la xiriira ayaa la soo sheegnay ee hoosyimaada halkan.
User 1. baahan yahay in ay soo booqdaan URL http://www.wondershare.com/phone-transfer/ soo bixi software ka dibna waxa loo soo dajiyo adigoo raacaya tilmaamaha. Marka la rakibo la dhamaystiro user u baahan yahay si uu u bilaabi aad u bilowdo hawsha.
2.Both hindisana waa in lagugu xiro computer si software iyaga ogaadaa in la bilaabo kala iibsiga.
User 3.Beerta markaas u baahan yahay in la hubiyo in button nuqul bilowga la isku soo riixayo.
Wareejinta xogta 4.The bilaabi doono si deg deg ah ka dhacaya iyo mar loo sameeyo geeddi-socodka la dhammeeyo.
> Resource > iPhone > Sidee si ay u gudbiyaan xiriirada ka iPhone in Blackberry